Yaa guulo badan labada Kooxood ee Man United iyo Man City ka hor kulankooda caawa ee Manchester Derby?? – Gool FM
(Manchester) 07 Maarso 2021. Kulanka ugu xiisaha badan horyaalka Premier League todobaadkan ayaa garooka Etihad ku dhexmari doona caawa labada kooxood ee kaga wada dhisan Magaalada Manchester ee Manchester City iyo Manchester United.
Haddaba waxaa la isweydiinayaa yaa guulo badan labada Kooxood ee Man United iyo Man City ka hor kulankooda caawa ee Manchester Derby??
>- Labada Manchester ayaa horyaalka Ingiriiska ku kulmay 151 kulan, waxayna Man United guul gaartay 58 kulan, halka ay Man City guuleysatay 45 kulan, waxayna barbarro galeen 48 kulan.
>- Dhinaca kala labada kooxood ee ka wada dhisan Magaalada Manchester ayaa guud ahaan wada kulmay 184 kulan, Man United ayaa badisay 76 kulan, halka Man City ay adkaatay 55 kulan, waxaana ay barbaro galeen 53 kulan.
Si kastaba ha noqotee labada dhinaca marka la eeg ee horyaalka iyo kulammada guud waxaa guulo badan kooxda caawa martida ah ee Manchester United.
Haddii aan eegno guulihii ugu waa weynaa ee ay labada Manchester kala gaareen ka hor kulankooda caawa baasmi doona 7:30 fiidnimo xilliga geeska Afrika.
Guushii ugu weyneed oo ay Manchester United ka gaartay Manchester City waxa ay ahayd markii 5-0 uga adkaatay ciyaar dhacday bishii November ee sanadkii 1994-kii.
Guushii ugu weyneed oo ay Manchester City ka gaartay Manchester United waxa ay ahayd markii ay min 6-1 uga adkaatay bishii Janaayo ee 1926-kii iyo October sanadkii 2011-kii.
"Ilaahay ayaa mahad leh, waan xusuusan doonaa illaa xabaasha goolkaan uu isiiyey Messi" - Yuu u hibeeyey Ilaix Moriba goolkiisii ugu horreeyey ee Barcelona?